Bezzia ndeye webhusaiti iyo iri chikamu cheakakura AB Internet boka. Redu peji rakakumikidzwa kumukadzi wanhasi, akazvimiririra, anoshanda nesimba mukadzi ane zvinonetsa. Chinangwa cheBezzia ndechekupa kuti muverengi awanikwe nhau dzichangoburwa mufashoni, runako, hutano uye hutano, pakati pevamwe.
Vapepeti vechikwata chedu vane hunyanzvi munzvimbo dzakaita senge psychology, dzidziso, fashoni uye runako kana hutano. Zvisinei nemapazi avo ehunyanzvi akasiyana, ivo vese vanogovana chinangwa chimwe, kuda kwekutaurirana. Kutenda kune yeBezzia yekunyora timu, mumakore achangopfuura webhusaiti yedu yanga ichisvika kune vakawanda kuverenga. Kuzvipira kwedu kuramba tichikura uye tichipa zvirimo zvemukati.
El Bezzia yekunyora timu Iyo inoumbwa nevanotevera vapepeti:
Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata chekunyora cheBezzia kana chero ipi yemamwe mawebhusaiti anoitirwa vakadzi vateereri, zadza fomu iri.
Munyori, muturikiri, blogger uye amai. Ini ndakazvarwa muBarcelona makore mashoma makumi matatu apfuura, akareba zvakakwana kuti ndipindwe muropa nehunyanzvi, fashoni, mimhanzi uye zvinyorwa. Kuda kuziva uye neimwe nzira kushaya hanya nehunhu, gara wakangwarira kuti usarasikirwa nechinhu chero icho icho hupenyu chinotipa!
Sezvo ndaive mudiki ndaive pachena kuti chinhu changu kwaive kuve mudzidzisi. Nekudaro, ini ndine degree muChirungu Philology. Chinhu chinogona kunyatsobatanidzwa pamwe neshungu yangu yemafashoni, runako kana zviitiko zvazvino. Kana isu tikawedzera diki mimhanzi kune izvi zvese, isu tatova nemenyu izere.
Makore makumi matatu ekuberekwa uye nezvimwe zvidzidzo zvakapihwa kune nyika yeinjiniya, kune zvakawanda zvishuwo zvinotora nguva yangu. Ndakave nemukana wekudzidza chimwe chazvo, mumhanzi; Kana iri chechipiri, kubika, ini ndinozvidzidzisa-ndega. Kubva pandakashanda sedhongi raamai vangu, ndinorangarira ndichinakidzwa nechido ichi chandinogona kugovana newe nekuda kweActualidad Blog. Ndinozviita kubva kuBilbao; Ndakagara ndichigara pano, kunyangwe ndichiedza kushanyira nzvimbo dzese dzinogoneka kuti nditakure bhegi pafudzi rangu.
Licenciada en Publicidad, lo que más me gusta es escribir. Además, me atrae todo lo que es estéticamente agradable y bello, por lo que soy fan de la decoración, la moda y los trucos de belleza. Aporto consejos e ideas con el fin de que sean útiles para otras personas.
Amai, mudzidzisi wezvedzidzo, psychopedagogue uye vanofarira zvekunyora nekutaurirana. Mufariri wekushongedza uye kuravira kwakanaka, ini ndinogara ndiri mukudzidza kunopfuurira ... ndichiita kuda kwangu uye zvandinofarira kuita basa rangu. Unogona kushanyira yangu webhusaiti yako pachako kuziva zvese.
Ndiri Paula, kunyangwe ndisina basa nekupfupiswa zita rangu muPau. Ini ndakadzidza kutaurirana kwekuteerera uye ini ndave kutanga kuronga nzira yakananga kune ramangwana rehunyanzvi. Pakati peredhiyo, terevhizheni uye madiki makambani ekugadzira, ini ndinosiya mukaha mune yangu ajenda yekugovana newe zvinhu zvinonyanya kunakisa zvandinoona munzira iyi.
Psychology mudzidzi, wongororo yekudzidzisa uye neakawanda mafaro. Chimwe chendinofarira kunyora uye imwe kutarisa mavhidhiyo uye kuverenga zvese zvine chekuita nerunako, zvigadzirwa, zvigadzirwa, zvipoda, nezvimwe ... Saka nzvimbo ino yakakwana sezvo ndichigona kuburitsa zvandinoda nekusanganisa zvese zvinovaraidza. Ndinovimba ndinogona kugovana newe zvandinoziva nezvenyaya iyi uye kuti iwewo, uchandibatsira kuti ndirambe ndichidzidza nezvenyaya iyi nezvako. Kutenda nekuverenga Bezzia.
Nyanzvi mumasocial network neInternet uye fashoni. Ini ndinoda kufambidzana nenhau dzichangoburwa uye matipi pamusoro pekunaka kwevakadzi. Kana iwe uchida kupenya, usazeze uye unditevere!
Blogger, dhizaina, maneja wenzanga ... asina zororo uye aine zvakawanda zvinodiwa zvinondiunza kumusoro wangu. Ini ndinofarira zvefashoni, cinema, mumhanzi ... uye zvese zvine chekuita nenyaya dzazvino nemaitiro. ChiGalician pamativi ese mana, ndinogara muPontevedra kunyangwe ndichiedza kufamba zvakanyanya nepandinogona. Ini ndinoramba ndichidzidza nekudzidza mazuva ese, uye ndinovimba ino nhanho nyowani ine mubayiro.
Ndiri chiremba wepfungwa uye munyori, ndinofarira kusanganisa ruzivo neunyanzvi uye nemikana mizhinji yekufungidzira. Semunhu, ndinodawo kunzwa zvakanaka nezvangu, saka pano ndiri kuzokupa matipi mazhinji ekuti uve wakanaka uye panguva imwechete wakanaka.
Ndakaberekerwa muMalaga, kwandakakurira uye kudzidza, asi pari zvino ndinogara muValencia. Ini ndiri grafiki dhizaini nehunyanzvi, kunyange hazvo kuda kwangu kwekureruka uye kune hutano kubika kwakanditungamira kuti ndizvitsaurire kune zvimwe zvinhu. Kudya kwakaipa mukuyaruka kwangu, kwakanditungamira kuti ndifarire kicheni ine hutano. Kubva ipapo zvichienda mberi, ndakatanga kunyora zvirevo zvangu pablog rangu "Chikara cheMabikirwo", icho chiri chipenyu kupfuura nakare kose. Iye zvino ndine mukana wekuti ndirambe ndichigovana mamwe madhiri anonakidza pane mamwe mablog nekuda kweActualidad Blog.
Mhoro! Ini ndiri Marta, wezvematongerwo enyika uye anofarira vana. Ini ndinoita vhidhiyo nezve matoyi ayo madiki mumba anonyanya kufarira. Pamusoro pekunakidzwa navo, vanozokwanisa kuwana ruzivo rwunozovabatsira munzira yavo yekudzidzisa uye yekudyidzana, vachidzidza kuenderana nemhuri yavo uye nharaunda yavo nenzira ine hutano uye inofara.
Musikana weGeek anodakadza nezve akateedzana, mabhuku uye katsi. Akapindwa muropa netii. Ini ndiri mukadzi wechiSpanish wechiSpanish anodawo fashoni uye ndinofunga ndinogona kuunza nyowani uye yekutanga maonero nezvazvo. Hupenyu hwedu hunotisarudzira uye isu tinofanirwa kutora mukana wavo, kuzvimiririra kwedu ndiko kiyi yekubudirira kwedu uye mufaro.
Carmen Espigares chinobata mufananidzo
Nyanzvi yezvepfungwa, HR nyanzvi uye maneja maneja. Granaína wehupenyu hwese uye anotsvaga zvibodzwa zvekuzadzisa. Zvimwe zvandinovaraidza? Imba mushawa, uzive neshamwari dzangu uye uone nzvimbo nyowani. Muverengi anoveterate anogara akagadzirira kusangana nematambudziko matsva nenyemwerero yakasimwa pachiso chake. Kufamba, kunyora uye kudzidza ndizvo zvido zvangu zvikuru. Mukuenderera mberi nekudzidziswa uye kudzidza muhupenyu, nekuti ... uye chii icho chavanodaidza kurarama kana isu tisinganyorovese zvese izvo zvinotipa isu ...?
Mhizha, hunyanzvi, kugadzirisazve marongero, zvipo zvekutanga, kushongedza, mhemberero ... YOSE HANDMADE.